Plex.Earth 3.0 Adeegyada WMS ee laga helo AutoCAD - Geofumadas
Oktoobar, 2012 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps
Plex.Earth 3.0, oo aan lahaa waqtigii aan isku dayi lahaa inta aan ku qeexayo taariikhda la heli karo ee ku jirta sawirka dhabta ah, ayaa ii yimid. Waxaa suurtogal ah bisha November ee 2012.
La soco AutoCAD 2013
Waxaa laga yaabaa in novel ugu waa in version tani waxaa si gaar ah u sameeyey AutoCAD 2013, ama mid ka mid ah qoraalkii ay toosan (Civil 3D 2013, 2013 AutoCAD Map, iwm)
Tani waa muhiim in la xuso, sida AutoDesk ka version this keeno naafada awood u leh inay dajiyaan 3D Google Earth Civil image iyo model ah digital, heshiis kaas oo la socda awoodda sameeyey Plex.Earth in qoraalkii hore, sida aan maanta la hadlay waxaan taabannay arrinka haddii ay ahayd sharci darro ama aan ahayn.
Sidan oo kale, PlexScape waxay leedahay heshiis ay la gasho Google si ay u awoodo in ay soo dhejiso sawirada, isu-dheeli-tiriso, soo dejinta shabakadda iyo khadka xadka. Inkastoo AutoCAD Macaamiisha 3D 2013 ayan suurtagal ahayn suurtagalnimada, inkastoo ay ahayd sawir naxwe ah oo leh xal aad u liidata.
Taageerada adeegyada WMS
Qaybtani waxay keenaysaa tabarka Plex.Earth - Map Explorer, ikhtiyaarka ah in lagu dhejiyo adeegyada khariidada webka, aad u xiiso leh, sababtoo ah illaa hadda ma jirto adeegsade AutoCAD ah oo ujeedkoodu yahay midka kaliya ee 3D ku shaqeeya.
Waxaan xasuustaa in qoraaladii hore ee aan samaynayey ay ku wareejinayeen WMS-ta Google, haddii ay taageerto oo halkaasna waxay soo dejineysaa sawirka. Hadda adeegyadana waxaa laga baaraandegi karaa URL toos ah ama meesha ay degto. Waa mid xiiso leh, maxaa yeelay waxaad dooran kartaa lakabyada la heli karo sida ku cad muuqaalka soo socda.
Waxaa sidoo kale lagu badbaadin karaa xml ee faylka faafinta pxmap, iyo sida aad ku arki karto kiiskan, kaas oo qaddarka ugu sarreeya ee PNOA iyo Cadastar Cartography ee IDE Española lagu qeexay. Kadibna waad soo wici kartaa faylka, lakabana horey ayaa loo qoondeeyey.
Marka adeegga la isticmaalo la qeexay, waxaa loo dhoofin karaa hal sawir, maasle ama joomatari nooceeda ah oo aan caadi ahayn sida aan ku samaynay Google Earth. Xaqiiqda halkan waa qalab lagu qurxiyo cidhifyada sawir ama dhowr isku mid ah.
Marka ugu fiican, waxaad ka raadin kartaa khariidadaha ka jira waddanka. Waxaan runtii jeclahay fikraddan, maaddaama ay hagayso isticmaalaha caadiga ah ee AutoCAD, oo aan aheyn khibrad GIS ah laakiin looyaqaan, oo aan fileynin inuu wax badan ka ogaado IDEs, laakiin ku leh sawir asal ah oo ku saabsan shaqada la horumarinayo. Sidaa awgeed curyaamiyahan Giriigga ah ee Plex.Earth ayaa fududaynaya xalka:
Xagee joogtaa? Halkan waa khariidada ay ka kooban tahay!
Dib u eegista Ribbon
Farsamooyinka asaasiga ah ee xadhigga iyo xargaha looxaanta ayaa si weyn loo hagaajiyay. Qalabka aan hore u ogaanay ayaa laga tagay gadaal labaad: Plex.Earth - Google Earth, waa kuwee fursadaha ay daabacaan AutoCAD ee Google Earth, soo dejinta sawirka masaajidka, xajmiga ama wadada iyo sameynta qaabka dijitaalka ah iyo mawduuca Google Earth ilaa AutoCAD.
Wareegga saddexaad ayaa ahaa Plex.Earth - Fidiyo, xaggee yihiin qalab loogu talagalay sawirka, sawirada dusha sare iyo iskuxirida isuduwidda adoo adeegsanaya adeegga WS waxa aad ka arki karto iskuduwaha Khariidadaha Google adigoo isticmaalaya nidaam kasta oo kasta ee isuduwidda adduunka.
In muddo gaaban, waxa ay u muuqataa tallaabo weyn ee keenidda Plex.Earth Web Services Map oo ku daray in ay waafajinta la images Google Earth wakiil sifooyinka AutoCAD ma laha, oo laga yaabaa in aan in muddo gaaban.
Waan xaqiijinayaa wixii aan horay u sheegay, markaan arkay markii ugu horeysay ee Plex.Earth: Waxyaalaha fudud ee saaxiibadood ee 'xalalka' waa wax la yaab leh:
Miyaad rabtaa sawirka Google Earth ee AutoCAD? Halkan waa
Xalalka sare Sure, ku rid mooska
Wadada jidka? Horay u soco, hoos u dhig sida xariiqda
Heerkulka heerka? Sidoo kale
Hadda adeegga khariidada.
Post Previous«Previous GeoConverter wuxuu isku xiraa CONDOR
Post Next Sokkia Tilmaame 50 Buugga Wareejinta WadartaNext »
8 Jawaab in "Plex.Earth 3.0 Load WMS adeegyada laga helo AutoCAD"
topo.ejroca isagu wuxuu leeyahay:
waa maxay gaaban ???
rakibi plex.earth ee rayidka ah 3d iyo dib sida jeer 3 iyo bilaabaan arki sokeeye ee xamuulka module ee plexearth laakiin waxaan arki tab lahayn, ma menu xaaladeed oo cajalad lahayn ama ku saabsan plex ah.
Waxaan arkay dhammaan goobaha shaqada ee muwaadiniinta.
waad ku mahadsantahay jawaabta x
Diido, ma jiraan buug gacmeed oo Isbaanish ah. Laakiin waxaa jira fiidiyowyo ku saabsan Youtube waxyaabo badan oo ah Plex.Earth
Alberto Rodriguez isagu wuxuu leeyahay:
Qalabkani waa mid xiiso leh oo faa'iido leh, waxaan horeyba u tijaabinayaa laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii
waxaa jira buugaag ku qoran luqada Isbaanishka ee isticmaalka iyo codsiga
Haddaad u jeeddo moodeelka qaabka dijitaalka ah iyo qaloocyada nivesl, haa. Plex.Earth wuxuu la shaqeeyaa nooca loo yaqaan 'AutoCAD' ee nooca caadiga ah wuxuuna ku siinayaa awood aad ku shaqeyso waxyaabo lagu qaban karo oo keliya barnaamijka 'Civil3D', sida soo dejinta mashiinnada kor u qaadista, soo saarista kontoroolada, iwm.
waad ku mahadsantahay Waxaan haystaa su'aal ah moduleka plex. Dhulka ayaan dhoofin karaa hec rasmiga ah iyada oo aan laheyn mashiinka bulshada rayidka ah tan iyo markii aan haysto otomaatiga fudud
Noocaas wali lama heli karo soo degsashada. Suurtagal ayay dhammaadka Nofembar horey u ahayd.
Dib-u-eegista aan sameeyay waxay ku saabsan tahay nooca Beta ee aad na siisay.
Waxaan qabaa su'aal ku saabsan halka aan ka soo dejisan karo barnaamijka 3.0 ee barnaamijkan sababtoo ah bogga rasmiga ah waxaa jira jeega 2.5 oo kaliya iyo haddii aad haysato, horey ayaad u bixin kartaa.